ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ အလှအပစံနှုန်းကိုပြောင်းလဲလိုက်တဲ့ မင်းသမီး ၃ ယောက်
ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ အလှအပစံနှုန်းကိုပြောင်းလဲလိုက်တဲ့ မင်းသမီး (၃) ယောက်
7 Aug 2017 . 2:03 PM
ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ အလှအပစံနှုန်းက အရမ်းကို Perfect ဖြစ်လွန်းပါတယ်။ V Shape မျက်နှာကျ ၊ မျက်လုံးနဲ့ နှုတ်ခမ်းလှလှလေးတွေနဲ့ ပြည့်စုံလွန်းတဲ့ မျက်နှာအလှလေးက ကိုရီးယားအနုပညာရှင်တွေမှာသာမက သာမန်လူတွေဆီကိုပါကူးစက်လာခဲ့တာကြာခဲ့ပါပြီ။ မျက်နှာခွဲစိတ်ပြုပြင်တဲ့ဆေးခန်းတွေဟာ ရပ်ကွက်ထိပ်ကအလှပြင်ဆိုင်တွေလိုပဲ မှိုလိုပေါက်နေခဲ့ပါတယ်။ ဒီလို အလှအပစံနှုန်းတွေရဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိူးကတော့ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ရုပ်သိပ်မကွာတော့တာပါပဲ။ သူနဲ့ပဲဆင်သလိုလို ၊ ကိုယ်နဲ့ပဲတူနေသလိုလို ဖြစ်လာပါတော့တယ်။ ဒါကြောင့်လည်းကိုရီးယားနိုင်ငံမှာ Miss ရွေးတဲ့အခါ မကွဲပြားတော့တဲ့ရုပ်ရည်တွေကြောင့် အများကဲ့ရဲ့တာခံခဲ့ရဖူးပါတယ်။
ဒီလို အလှစံနှုန်းတွေကို ပြောင်းလဲလိုက်တဲ့ မင်းသမီးသုံးယောက်ရှိပါတယ်။ သူတို့တွေက ရှိရင်းစွဲအလှကိုတန်ဖိုးထားတတ်အောင် ကိုယ့်ရုပ်ရည်ကိုချစ်တတ်အောင် ပြောင်းလဲပေးနိုင်ခဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ အများအမြင်မှာ ရုပ်ဆိုးတယ်လို့ထင်ကြပေမယ့် သူတို့ရဲ့အောင်မြင်မှုနဲ့ အလှစစ်က အတော်လေးလွှမ်းမိုးထားနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။
Kim Go Eun ဟာလက်ရှိမှာ အတော်လေးပေါ်ပြူလာဖြစ်နေတဲ့အနုပညာရှင်တစ်ယောက် ဖြစ်နေပါပြီ။ Goblin ကြောင့်အောင်မြင်မှုရလာတဲ့ သူမက အနုပညာအရည်အသွေးရော ၊ အလှစစ်ကိုရော ဖော်ထုတ်ပြသနိုင်ခဲ့သူပါ။ Goblin ဇာတ်လမ်းတွဲအောင်မြင်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာ သူမကိုပရိသတ်တွေက ပိုချစ်လာခဲ့ကြပြီး ခွဲစိတ်ပြုပြင်မှုမလုပ်ထားတဲ့ သူမလို အလှမျိုးကိုလည်း တန်ဖိုးထားတတ်လာကြပါတယ်။
သူမကအလှအပထိန်းသိမ်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး Instyle မဂ္ဂဇင်းကိုဖွင့်ဟခဲ့ရာမှာ “ကျွန်မတစ်နေ့ကို ရေနှစ်လီတာသောက်ပါတယ်။ ပြီးတော့အသားခြောက်လာပြီလို့ထင်တဲ့အချိန်တိုင်း အစိုဓာတ်ဖြည့်ပေးတဲ့ Facial Spray ကိုဖျန်းတယ်။ ညအိပ်ရာဝင်ချိန်ကျရင် Essential Oil နှစ်စက်သုံးစက် အမြဲလိမ်းတယ်။ တစ်ခါတလေ အသားအရေက ညစ်နွမ်းလာရင် Mask ကပ်ပေးလေ့ရှိတယ်” လို့ဖွင့်ဟခဲ့ပါတယ်။
The Priests ရုပ်ရှင်ကားနဲ့ အောင်မြင်မှုရခဲ့တဲ့သူမက လက်ရှိမှာလည်း နာမည်ကြီးမင်းသမီးတစ်လက်ဖြစ်နေပါတယ်။ ဒီရုပ်ရှင်ကားကြောင့် Blue Dragon Film Awards မှာ အကောင်းဆုံးမျက်နှာသစ်သရုပ်ဆောင်ဆုကို ဆွတ်ခူးခဲ့တဲ့သူမက The Silenced ရုပ်ရှင် ၊ Cinderella and Four Knights ဇာတ်လမ်းတွဲနဲ့လည်း ပရိသတ်တွေအချစ်ကိုရယူနိုင်ခဲ့သူပါ။ ယောက်ကျားလေးဆန်ပြီး သဘာဝအလှကြောင့် ကောင်လေးတွေသာမက ကောင်မလေးတွေတော်တော်များများကပါ သူမ Fan တွေဖြစ်ကုန်ကြပါတယ်။
သူမရဲ့အလှနဲ့ပတ်သက်ပြီး Park So Dam က“ကျွန်မရဲ့ ဆွဲဆောင်မှုကအများနဲ့မတူတဲ့ရုပ်ရည်ကြောင့်လို့ ထင်ပါတယ်။ ကျွန်မရဲ့ ရုပ်ရည်အပေါ်မှာ ရာနှုန်းပြည့်စိတ်ကျေနပ်မှုမရှိပေမယ့် ဘယ်တော့မှခွဲစိတ်ပြုပြင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဘုရားပေးတဲ့ ဒီမျက်နှာကိုပဲ မြတ်နိုးပါတယ်” လို့ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
Han Ye Ri ကတော့ အသက် ၂၉ နှစ်အရွယ်ရှိပါပြီ။ သူမဟာ ဇာတ်လမ်းတိုတွေနဲ့ Independent Film တွေမှာ အဓိကပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ As One ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ကားမှာ စားပွဲတင်တင်းနစ်ကစားတဲ့ကောင်မလေးအဖြစ် ပီပီပြင်ပြင်သရုပ်ဆောင်ရင်း သူမရဲ့သဘာဝအလှနဲ့ သရုပ်ဆောင်စွမ်းရည်ကို ပရိသတ်ကသိသွားခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာ Six Flying Dragons ၊ Age of Youthစတဲ့ဇာတ်လမ်းတွဲတွေမှာ သရုပ်ဆောင်ရင်း အောင်မြင်မှုရလာတဲ့ သူမကယောက်ကျားလေးတွေကြားမှာသာမက မိန်းကလေးတွေကြားမှာလည်း ပေါ်ပြူလာဖြစ်ပါတယ်။ နုပျိုလွန်းတဲ့သူမရဲ့အလှကိုတော့ Timeless Beauty ရယ်လို့တင်စားလေ့ရှိကြပါတယ်။
တကယ်တော့ ရှိရင်းစွဲရုပ်ရည်နဲ့လှပခြင်းကသာ သူမတူတဲ့အလှကိုရမှာပါနော်။ ခွဲစိတ်ပြုပြင်ထားတဲ့အလှကတော့ နောက်ပိုင်းမှာ သူလိုကိုယ်လိုလှပခြင်းမျိုးတွေဖြစ်စေနိုင်တာမို့ ရှိရင်းစွဲအလှကိုသာ ပိုမိုပေါ်လွင်အောင် ပြင်ဆင်ပြီးကိုယ်ပိုင်အလှတရားတစ်ခုကိုတည်ဆောက်နိုင်ကြဖို့လိုပါတယ်။
ကိုရီးယားနိုငျငံရဲ့ အလှအပစံနှုနျးကိုပွောငျးလဲလိုကျတဲ့ မငျးသမီး (၃) ယောကျ
ကိုရီးယားနိုငျငံရဲ့ အလှအပစံနှုနျးက အရမျးကို Perfect ဖွဈလှနျးပါတယျ။ V Shape မကျြနှာကြ ၊ မကျြလုံးနဲ့ နှုတျခမျးလှလှလေးတှနေဲ့ ပွညျ့စုံလှနျးတဲ့ မကျြနှာအလှလေးက ကိုရီးယားအနုပညာရှငျတှမှောသာမက သာမနျလူတှဆေီကိုပါကူးစကျလာခဲ့တာကွာခဲ့ပါပွီ။ မကျြနှာခှဲစိတျပွုပွငျတဲ့ဆေးခနျးတှဟော ရပျကှကျထိပျကအလှပွငျဆိုငျတှလေိုပဲ မှိုလိုပေါကျနခေဲ့ပါတယျ။ ဒီလို အလှအပစံနှုနျးတှရေဲ့ ဘေးထှကျဆိုးကြိူးကတော့ တဈယောကျနဲ့တဈယောကျရုပျသိပျမကှာတော့တာပါပဲ။ သူနဲ့ပဲဆငျသလိုလို ၊ ကိုယျနဲ့ပဲတူနသေလိုလို ဖွဈလာပါတော့တယျ။ ဒါကွောငျ့လညျးကိုရီးယားနိုငျငံမှာ Miss ရှေးတဲ့အခါ မကှဲပွားတော့တဲ့ရုပျရညျတှကွေောငျ့ အမြားကဲ့ရဲ့တာခံခဲ့ရဖူးပါတယျ။
ဒီလို အလှစံနှုနျးတှကေို ပွောငျးလဲလိုကျတဲ့ မငျးသမီးသုံးယောကျရှိပါတယျ။ သူတို့တှကေ ရှိရငျးစှဲအလှကိုတနျဖိုးထားတတျအောငျ ကိုယျ့ရုပျရညျကိုခဈြတတျအောငျ ပွောငျးလဲပေးနိုငျခဲ့သူတှဖွေဈပါတယျ။ အမြားအမွငျမှာ ရုပျဆိုးတယျလို့ထငျကွပမေယျ့ သူတို့ရဲ့အောငျမွငျမှုနဲ့ အလှစဈက အတျောလေးလှမျးမိုးထားနိုငျခဲ့ပွီဖွဈပါတယျ။
Kim Go Eun ဟာလကျရှိမှာ အတျောလေးပျေါပွူလာဖွဈနတေဲ့အနုပညာရှငျတဈယောကျ ဖွဈနပေါပွီ။ Goblin ကွောငျ့အောငျမွငျမှုရလာတဲ့ သူမက အနုပညာအရညျအသှေးရော ၊ အလှစဈကိုရော ဖျောထုတျပွသနိုငျခဲ့သူပါ။ Goblin ဇာတျလမျးတှဲအောငျမွငျပွီးနောကျပိုငျးမှာ သူမကိုပရိသတျတှကေ ပိုခဈြလာခဲ့ကွပွီး ခှဲစိတျပွုပွငျမှုမလုပျထားတဲ့ သူမလို အလှမြိုးကိုလညျး တနျဖိုးထားတတျလာကွပါတယျ။
သူမကအလှအပထိနျးသိမျးမှုနဲ့ပတျသကျပွီး Instyle မဂ်ဂဇငျးကိုဖှငျ့ဟခဲ့ရာမှာ “ကြှနျမတဈနကေို့ ရနှေဈလီတာသောကျပါတယျ။ ပွီးတော့အသားခွောကျလာပွီလို့ထငျတဲ့အခြိနျတိုငျး အစိုဓာတျဖွညျ့ပေးတဲ့ Facial Spray ကိုဖနျြးတယျ။ ညအိပျရာဝငျခြိနျကရြငျ Essential Oil နှဈစကျသုံးစကျ အမွဲလိမျးတယျ။ တဈခါတလေ အသားအရကေ ညဈနှမျးလာရငျ Mask ကပျပေးလရှေိ့တယျ” လို့ဖှငျ့ဟခဲ့ပါတယျ။
The Priests ရုပျရှငျကားနဲ့ အောငျမွငျမှုရခဲ့တဲ့သူမက လကျရှိမှာလညျး နာမညျကွီးမငျးသမီးတဈလကျဖွဈနပေါတယျ။ ဒီရုပျရှငျကားကွောငျ့ Blue Dragon Film Awards မှာ အကောငျးဆုံးမကျြနှာသဈသရုပျဆောငျဆုကို ဆှတျခူးခဲ့တဲ့သူမက The Silenced ရုပျရှငျ ၊ Cinderella and Four Knights ဇာတျလမျးတှဲနဲ့လညျး ပရိသတျတှအေခဈြကိုရယူနိုငျခဲ့သူပါ။ ယောကျကြားလေးဆနျပွီး သဘာဝအလှကွောငျ့ ကောငျလေးတှသောမက ကောငျမလေးတှတေျောတျောမြားမြားကပါ သူမ Fan တှဖွေဈကုနျကွပါတယျ။
သူမရဲ့အလှနဲ့ပတျသကျပွီး Park So Dam က“ကြှနျမရဲ့ ဆှဲဆောငျမှုကအမြားနဲ့မတူတဲ့ရုပျရညျကွောငျ့လို့ ထငျပါတယျ။ ကြှနျမရဲ့ ရုပျရညျအပျေါမှာ ရာနှုနျးပွညျ့စိတျကနြေပျမှုမရှိပမေယျ့ ဘယျတော့မှခှဲစိတျပွုပွငျမှာမဟုတျပါဘူး။ ဘုရားပေးတဲ့ ဒီမကျြနှာကိုပဲ မွတျနိုးပါတယျ” လို့ပွောပွခဲ့ပါတယျ။
Han Ye Ri ကတော့ အသကျ ၂၉ နှဈအရှယျရှိပါပွီ။ သူမဟာ ဇာတျလမျးတိုတှနေဲ့ Independent Film တှမှော အဓိကပါဝငျသရုပျဆောငျခဲ့ပါတယျ။ As One ဆိုတဲ့ရုပျရှငျကားမှာ စားပှဲတငျတငျးနဈကစားတဲ့ကောငျမလေးအဖွဈ ပီပီပွငျပွငျသရုပျဆောငျရငျး သူမရဲ့သဘာဝအလှနဲ့ သရုပျဆောငျစှမျးရညျကို ပရိသတျကသိသှားခဲ့ပါတယျ။ အဲဒီနောကျပိုငျးမှာ Six Flying Dragons ၊ Age of Youthစတဲ့ဇာတျလမျးတှဲတှမှော သရုပျဆောငျရငျး အောငျမွငျမှုရလာတဲ့ သူမကယောကျကြားလေးတှကွေားမှာသာမက မိနျးကလေးတှကွေားမှာလညျး ပျေါပွူလာဖွဈပါတယျ။ နုပြိုလှနျးတဲ့သူမရဲ့အလှကိုတော့ Timeless Beauty ရယျလို့တငျစားလရှေိ့ကွပါတယျ။
တကယျတော့ ရှိရငျးစှဲရုပျရညျနဲ့လှပခွငျးကသာ သူမတူတဲ့အလှကိုရမှာပါနျော။ ခှဲစိတျပွုပွငျထားတဲ့အလှကတော့ နောကျပိုငျးမှာ သူလိုကိုယျလိုလှပခွငျးမြိုးတှဖွေဈစနေိုငျတာမို့ ရှိရငျးစှဲအလှကိုသာ ပိုမိုပျေါလှငျအောငျ ပွငျဆငျပွီးကိုယျပိုငျအလှတရားတဈခုကိုတညျဆောကျနိုငျကွဖို့လိုပါတယျ။
by Ju Jue . 52 mins ago
လူငယ်တစ်ယောက်ဆီမှာ ရှိသင့်တဲ့ Fashion Accessories ၄ခု
by redrose . 19 hours ago
by redrose . 20 hours ago
လူ့ဘဝကို အောင်မြင်စေမယ့် အမူအကျင့် (၇) မျိုး
by Kyaw Soe Aung . 21 hours ago
လက်သည်းဆက်ခြင်းက မပြောပြတဲ့ ဆိုးကျိုးများ
by redrose . 21 hours ago
ပယ်နယ်တီမှာ စီရော်နယ်လ်ဒို (C.Ronaldo) မျက်လှည့်ပြခဲ့တာလား
တစ်ကိုက်စားမိရင် ဆွေမျိုးမေ့သွားနိုင်တဲ့ ဝက်သားပဲလိပ်လေး
‘Valentine’s Day’ ကို မကြိုက်တဲ့ ကမ္ဘာကျော်ပုဂ္ဂိုလ် (၇) ဦး